Sport Betting ဆိုတာဘယ်အချိန်ကစတင်ခဲ့တာလဲ? ဘယ်သူကစခဲ့တာလဲ? ဘယ်လိုစခဲ့တာလဲ?
ဒီမေးခွန်းတွေကိုတစ်ကယ်ပဲဖြေပေးချင်သော်လဲ ဘယ်သူမှအဖြေအတိအကျကိုမသိကြပါဘူး။ သက်သေအထောက်အထားတွေအရတော့ Sport Betting ဟာ ရောမ ကနေစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီး သမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ Greek ခေတ်မှာ မြင်းရထားတွေ ပြိုင်ရာကနေစခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေဆိုရင် ဒီထက်စောတဲ့အချိန်မှာထဲက Sport Betting ရှိနေတာလို့ ဆိုကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်သေချာတာကတော့ လူတွေက Sports ပွဲတွေရဲ့ ရလဒ်အပေါ်မှာ လောင်းကြေးထပ်ခဲ့တာဟာ Sports ပွဲစဉ်တွေမပေါ်ပေါက်ခင်ထဲကပါ။ ဘယ်အချိန်ကပဲ စခဲ့စခဲ့ အခုခေတ်မှာတော့ နေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်တဲ့ Big Business ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ! အရင်တုံးထဲက လူပေါင်းသန်းချီပြီး နှစ်သက်ခဲ့ကြတာပါ။ တစ်ချို့ကတော့ တစ်ခါတစ်ရံမှသာ ဖြစ်ပြီးတော့ အချို့ကတော့ အမြဲတမ်းလိုလိုကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ကစားဖြစ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အပျော်သက်သက်ကစားတာဖြစ်ပေမယ့် တစ်ချို့ကဒီအပေါ်အခြေခံပြီး Professional ကျကျ Serious ဆန်ဆန်နဲ့ တစ်ကယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ ဝင်ငွေရအောင်ဖန်တီးကြပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်ကရော ဘယ်လိုလူမျိုးထဲမှာပါမလဲ? ကိုယ့်အတွက်ရော အံကိုက်ဖြစ်မလား?
Sports နဲ့ပက်သက်ပြီး Betting မစခင်မှာ ဒီကစားနည်းဟာ ကိုယ့်အတွက်ရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအတွက်ရနိုင်တဲ့ ဆုလဒ်တွေကအရမ်းကိုလိုချင်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ထည့်တွေးသင့်တဲ့အရာတွေလဲရှိပါတယ်။ အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးကြည့်လိုက်ပါ။
1. ကိုယ့်ကအလုပ်တစ်ခုကို အစွဲအလမ်းကြီးနဲ့လုပ်တတ်လား?
2. ငွေကုန်ကြေးကျ ခံနိုင်လား?
4. အားကစား(Sports) ကိုနှစ်သက်လား?
ပထမဆုံးမေးခွန်းကိုသာ Yes ဖြေလိုက်ရင် တခြားမေးခွန်းတွေ ဆက်ကြည့်နေစရာတောင် မလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ကတစ်ခုခုကို အရမ်းကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းကြီးလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ရင် Gambling ဘက်ကိုမလှည့်တာကောင်းပါတယ်။ ဒုတိယမေးခွန်းကို Yes ဖြေလိုက်ရင်လဲ အတူတူပါပဲ။ ကိုယ့်မှာကစားဖို့အတွက် ငွေသက်သက်ဖယ်ထားပြီးတော့ အဲ့ငွေကိုအကုန်ခံနိုင်တယ်ဆိုမှသာ လုပ်သင့်ပါတယ်။ အကုန်မခံနိုင်ရင်တော့ မစွန့်စားသင့်ပါဘူး။ ဒါကတော့ Common Sense သက်သက်ပါ။
ကိုယ်ကစွဲလမ်းတတ်တဲ့အကျင့်လဲမရှိဘူး၊ ငွေကိုလဲစီမံနိုင်ပြီး အကုန်လဲခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ နောက်မေးခွန်း ၂ခုက သော့ချက်ပါပဲ။ စွန့်စားတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်၊ အားကစားပွဲတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Sports Betting နဲ့အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးများသွားပါပြီ! လုံးဝကို 100% ကြိုက်နှစ်သက်ပါမယ်လို့တော့ အာမမခံနိုင်ပေမယ့် တစ်ကယ်စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲသတိထားရမှာက အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ချဉ်းကပ်ဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ခေါက် နှစ်ခေါက်စမ်းကြည့်ပြီး လောင်းလိုက်တာနဲ့ကွက်တိကျပြီး အနိုင်ရသွားဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အခွင့်အရေးကတစ်ကယ်ကိုရှားတာကြောင့် ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲမှာကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာ ပိုက်ဆံပြန်ဝင်ဖို့အတွက်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကစားနည်းဟာ အချိန်နဲ့ ကြိုးစားမှုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာထားပါ။
လူတစ်ချို့ကကြတော့ Sports Betting ကိုစိတ်ဝင်စားတာက အားကစားပွဲစဉ်တွေနဲ့လဲ အမြဲထိတွေ့နေပြီးတော့ ရလဒ်ကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ ခန့်မှန်းချင်လို့ပါ။ သူတို့သိထားတဲ့ အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာတွေကို ဘယ်လောက်အထိကျွမ်းကျင်နေလဲဆိုပြီးသိချင်လို့ လက်တည့်စမ်းကြတဲ့သဘောနဲ့ လောင်းတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကလဲ လျော်ကြေးတွေအများကြီးရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့စိတ် မရှိပဲနဲ့ အပျော်သဘောသက်သက်ပဲကစားကြတာပါ။ ဒါပေမယ့်လဲ အနိုင်ရပြီးလျော်ကြေးတွေရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးပျော်တာပေါ့! ကျွန်တော်တို့က Professional ကျကျနဲ့ အမြတ်ရဖို့ဆိုတာ တစ်ကယ့် Target ဆိုပေမယ့်လဲ ကိုယ်တွေခန့်မှန်းပြီး လောင်းလိုက်လို့ အနိုင်ရလာရင် အရမ်းကိုပျော်ရပါတယ်။
ငွေကြေးအမြတ်ရဖို့က အရေးမကြီးဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပေမယ့်လဲ ကိုယ့်ခန့်မှန်းချက်မှန်နေတဲ့ Feeling ကိုကအရမ်းကိုရင်ခုန်ဖို့လဲ ကောင်းသလို အောင်မြင်မှုရသွားတဲ့ Feeling မျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ ဒါတွေကတော့ Sport Betting ရဲ့အဓိကအကျိုးအမြတ်တွေပါ။ ဒါပေမယ့်လဲ တစ်ခုစိတ်ထဲရှိဖို့လိုတာက “ Sport Betting မှာစတင်ပါဝင်ဖို့လွယ်ပါတယ် “။ နည်းပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့ အခုခေတ်မှာ လူကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံပြီး စွန့်စားနေစရာမလိုပဲနဲ့ ဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိတာနဲ့တင် Online Casino တစ်ခုမှာ သွားပြီး Sports Betting ကိုအားကစားနည်းမျိုးစုံအတွက် ကစားလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Online Casino တိုင်းက Sports Betting မထည့်ပေးပေမယ့် အဆင့်မှီ Casino ဖြစ်တဲ့ JDBYG လိုမျိုး Online Casino တွေမှာတော့ Sports Betting အပြင်ကို တခြား Casino ကစားနည်းအစုံအလင်ပါဝင်ပြီးတော့ Computer နဲ့ရော ဖုန်းနဲ့ရောလွယ်ကူစွာ ကစားလို့ရနေပါပြီ!
Slot Game အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Slot Game အကြောင်းတစေ့တစောင်း ဒီလင့်လေးမှာစလော့အကြောင်းဝင်ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်အခြေခံအချက်အလက်လေးတွေကိုတော့သိဖို့ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။
[…] ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ Online Bookies တွေကို ရွေးချယ်ရတာလည်း […]